Halatra moto Faravohitra Teny 67ha atsimo no tratra ilay jiolahy
Lehilahy iray nanosika moto marika Kymko G5 tamin’ny lalana 67 ha atsimo no sendra ny polisy teo am-panatanterahana ny asany.
Rehefa nanontaniana ilay rangahy nanosika moto dia nilaza fa tsy tompony sady tsy manana ny taratasy na « papier ». Avy hatrany dia nogiazana ilay moto ary nentina natao famotorana ilay lehilahy nanosika izany. Nosavaina moa ilay moto ka nahitana taratasy vitsivitsy nisy laharana finday tao.
Nantsoina avy hatrany ny laharana izay milaza ho tompon’ilay moto monina eny Faravohitra. Rehefa tonga tao amin’ny biraon’ny polisy io dia naneho ny taratasy rehetra ary voamarina fa azy marina. Nambarany fa efa namidiny tamin’ny rahalahiny izy io, saingy izy hatrany no mikarakara azy ary vao very ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 12 ora atoandro.
Avy hatrany dia nametraka fitoriana ity farany. Niaiky ny helony moa ilay lehilahy mpangalatra. Efa naverina tamin’ny tompony ny entana. Natolotra ny fampanoavana omaly alakamisy 9 janoary 2020 ny raharaha.